Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo gaaray magaalada Abu-Dabai | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo gaaray magaalada Abu-Dabai
ABU-DABAI – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafti ballaaran uu hoggaaminayo ayaa gaaray xalay magaalada Abu-Dabai ee xarunta Imaaraatka carabta halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyey.
Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa in uu wadahadallo la yeesho Madaxweynaha Isu-taga Imaaraatka carabta Shiikh Mohamed Bin Zaayed Ala-Nahyan.
Maalinta Isniinta ah ayaa lagu wadaa in halkaas uu ka furmo wadahadalada rasmiga ah ee madaxda labada dowladood.
Waftigan ayaa ka kooban wasiiro ka tirsan Xukuumadda Kheyre iyo xubno ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ayaa casumaad ka helay dowladda Imaaraatka carabta iyadoona wadahadallada xoogoodu noqon doono xiriirka labada dal iyo horumarinta Iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga geeska afrika.
Dhanka kale Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ayaa dowladda Masar iyo shacabkeeda uga tacsiyeeyey dadkii uga dhintay laba qarax oo lala beegsaday laba kaniisadood oo ku yaalla magaalooyinka Tana iyo Alexsenderia halkaasoo ay ku dainty 45 qof.